ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၆-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၆-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ ခိုင်မာမှုရှိဖို့ လို click
- SSA/SSPP စစ်တပ်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ် click
- ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝရပ်ဆိုင်းရေး ရွာသား ၃ဝဝ ကျော် တောင်းဆို ဆန္ဒပြ click
- ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် ကူညီသူတွေကို တရားစွဲ click
- လယ်သမားအရေး ကူညီသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တရားစွဲခံရ click
- လယ်ယာထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစိုးရမူဝါဒကြောင့် အားနည်း click
- ကချင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်ရယူဖို့ တရုတ် တိုက်တွန်း click
- လွှတ်တော်မှာ အဓိက ဘာတွေ ဆွေးနွေးကြမလဲ click
- ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၀န်ကြီးတွေ ဗဟိုကော်မတီကနေ နှုတ်ထွက် click
- မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့ လွှတ်တောအမတ် ပြော click
- လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ပြဌာန်းဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေး click
- ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အမြင်မှားမခံရအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပေး click
- အမုန်းပွားစေတဲ့ ရေးသားပြောဆိုမှုတွေ ရှောင်ရှားရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဖော်ပြချက် ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ ဆွေးနွေး click
- သံဃာ့ဆွေးနွေးပွဲ နိုင်ငံတဝှမ်းက သံဃာတော် ရာနဲ့ချီ တက်ရောက်မည် click
- BUDDHIST is NOT TERROR click
- ခုတ်ရာတလွဲ ရှတာ တနေရာဖြစ်နေသည် (ဆောင်းပါး) click
- ထောင်ကြွေးကျန်ပုဒ်မ မသုံးတော့ဘူးဆိုတော့ (ပြောချင်လွန်းလုို့) click
- ဦးဝင်းတင်နဲ့ နေထိုင်ခြင်း (၉) click
- ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တီဗွီသတင်းများ (ရုပ်သံ) click
- ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ဖရူဆိုမြို့နယ် စစ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရုပ်သံ) click
- ကနေဒါ ၈၈ မျိုးဆက်ညီလာခံသို့ မိတ်ဆွေများ ရပ်နီးရပ်ဝေး တက်ရောက်နိုင်ဟု ဆို click
- ၈၈ အဖွဲ့နဲ့ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဆွေးနွေး click
- ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဒေါက်တာသိန်းလွင် အမြင် - ၂ (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာအမျိုးသမီး ၁၃ ဦး ထိုင်းမှာ အဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာဘဝက လွတ်မြောက် click
- ဂျပန်နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ရှမ်းဒုက္ခသည်တွေကို ဆန်အိတ်ထောင်ချီ ထောက်ပံ့ click
- နဝဒေး ပန်းချီပြခန်းက ပန်းချီပြပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ပြောစရာတွေလည်း တပုံကြီး ရှိသေးတယ် (၄၈၆) - ပန်းချီနဲ့ ဂီတ click
- မန်ဒဲလား ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် မိသားစုဝင်တွေ အရေးပေါ် တွေ့ဆုံ click
- သမ္မတ အိုဘားမား အာဖရိကခရီးစဉ် (ရုပ်သံ) click
- စနိုဒင်ကို ရုရှားကနေ မဆိုင်းမတွ နှင်ထုတ်ဖို့ အမေရိကန် တိုက်တွန်း click
- Snowden ကို အမေရိကန်လက် လွှဲပေးဖို့ ရုရှား ငြင်းဆန် click
- Snowden ရုရှားပိုင်နက်ထဲမရှိ မော်စကို ငြင်း click
- စနိုဒန်ကိစ္စ စွပ်စွဲမှု ရုရှားနဲ့ တရုတ် ပြန်ချေပ click
- ဆီးရီးယားသူပုန်နဲ့ နိုင်ငံတကာ လက်နက် အကူအညီ (ရုပ်သံ) click
- အာဖဂန်သမ္မတ အိမ်တော်ဝင်း တိုက်ခိုက်ခံရ click
- ကာဘူးလ်က သမ္မတအိမ်တော်အနီးကို တိုက်ခိုက် click
- Arab Idol ရွေးခံရတဲ့ လူငယ်ကို သူရဲကောင်း အိမ်ပြန်သဖွယ် ကြိုဆို click
- အင်ဒိုနီးရှားတောမီး (ရုပ်သံ) click
ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ. မှာ မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာ ၂ ခု
ထုံးစံအတိုင်း အရင် မင်းများလက်ထက်က ခရိုနီတွေ နဲ.
ပေါင်းထားတဲ. ကုမ္ပဏီတွေ ဘဲ အရွေးခံရမယ် လို.ဘဲ
အများက ယုံကြည်နေကြတာပါ ။
ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီး မြန်မာ. mobile ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားကြတာက
( ၂ ချက်ထဲပါ)
... တယ်လီဖုံး သိပ်သည်းဆ နည်းနေလို.
.... အစိုးရ လက်ရှိ ကောက်ခံနေတဲ. ဖုံးပြောခ ကို
သဘောကျလို. .. လို.မြင်ပါတယ် ။
ခုလည်း ကုမ္ပဏီတွေ ၁၁ ခုသာ ပြိုင်နေကြတယ် ။
ပြည်သူတွေလိုလားတာ ကတော. ( ၂ ချက်ထဲပါ)
... (၁) ဖုံးပြောခ ဒီထက် သိသိသာသာ လျှော.ပေးဖို.
... (၂) မြန်နှုန်းမြင်. အင်တာနက် ကို သက်သာတဲ.နှုန်းထား
နဲ. သုံးရဖို.ပါ ။
... ဆင်းကဒ် အလကားပေးတာ ၊ Hand Set အလကားပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ။
မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာ ၂ ခု
ရွေးတော.မယ်.လူကြီး များ ရိုးသားပွင်.လင်းစွာ
ပြည်သူ.အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါစေ ။